VITAMIIN FOR ORCHIDS: MAXAY YIHIIN DHIBAATOOYINKA AY KA GAABANYIHIIN IYO XAD-DHAAFKA, SIDA LOO DAWEEYO WARSHADDA QAYBAHA KOOXDA B EE GURIGA, WAXA KU JIRA QAYB KA MID AH HUDHEELKA? - SOOSAARKA DALAGGA
Sidee ku noqotaa ubaxyada cusub ee cusub? Dhammaan wixii ku saabsan quudinta orchids ee leh fitamiino
Orchid ma si buuxda u kori doono oo ubaxi doona iyada oo aan daryeel lahayn. Marka lagu daro waraabinta, iftiinka iyo heerkulka, waxaa muhiim ah in si haboon oo waqtigu u quudiyo ubaxa, gaar ahaan fitamiinada. Thanks to iyaga, dhirta ma helin cunto kaliya, laakiin sidoo kale waxay dhaqaajisaa difaaca ay si adag u istaagaan cudurrada iyo cayayaanka.
Faytamiin buuxsamaya orchids ayaa loo baahan yahay si ay u koraan si deg deg ah oo aad u xoog badan. Intaa waxaa dheer, dhaymahaani waxay ku kordhineysaa ubax dheer, maxaa yeelay waxay buuxineysaa tamarta korodhsan nidaamkaan. Haddii orchids ayan lahayn fitamiin, ubaxu waxay lumin doonaan quruxdii hore., iyo caleemaha u leexan doono iyo huruud isu beddeli doonaan. Haddii dhirta aysan waqti badan ku duugin, tani waxay sidoo kale muujineysaa la'aanta nafaqo ku filan. Faytamiinada dheeraadka ah ayaa kaa caawin doona xalinta dhammaan dhibaatooyinka la kulmay iyo dib ugu soo celinta ubaxyada cusub ee cusub. Waxaan ku qoray maqaalkan ku saabsan waxa Bacriminta ku haboon dhirta si ay u Bloom iyo siin carruurta, iyo sida loo quudiyo Orchid inta lagu jiro ubax akhrinta halkan.
Waa maxay walxaha loo baahan yahay?
Dhamaan nafaqooyinka ubaxa waxay ka heli karaan qoyaanka, hawada iyo jilif, taas oo orchids ku koraan dabiiciga ah. Laakiin waxay dhacdaa in ubaxadu aanay haysan wax ku filan oo ku filan, ka dibna fiitamiinadu waxay yimaadaan badbaadinta. Waxaa lagu talinayaa in la fuliyo quudinta caynkan oo kale ah bilawga xilliga dayrta, maadaama ay cunnadu aysan awoodin inay doortaan nafaqada looga baahan yahay koritaanka.
Qeybaha soo socda ayaa faa'iido u leh ubaxa:
Nitrogar. Maaddadani waxay lagama maarmaan u tahay caleemaha sii kordhaya. Haddii xoogsaariddu ay hooseeyso, caleemuhu waxay bilaabayaan inay dhacaan, ubaxa naftuna way dhiman doontaa. Guga waxaa ugu fiican in la isticmaalo Bacriminta leh content a nitrogen sare.
Potassium. Maaddadani waxay hagaajineysaa nidaamka sawir-qaadis. Intaa waxaa dheer, waxay ilaalisaa dhirta ka cudurada kala duwan iyo cayayaanka. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro kiimikada dharka sare xagaaga xagaaga, marka orchid ay sida ugu badan saameeyeen arrimaha deegaanka.
Phosphorus. Tani waxay mas'uul ka tahay muddada ubax, sidaas darteed in dayrta waa lagama maarmaan in la bilaabo barista bacriminta.
Ascorbic acid. Tani waxay ka caawisaa xoojinta difaacida ubaxa. waxyaabaha ka mid ah kooxda C waxay abuuraan ilaalin lagu kalsoonaan karo ee orchid ka soo horjeeda saameynta taban ee raajada UV, iyo sidoo kale xakameynaya saameynta fara-gelinta xagjirnimada.
Hordhaca fiitamiinada waxaa lagu muujiyey xaaladaha soo socda:
sii-deyn cusub oo caafimaad leh;
kor u qaadista dhirta;
iswaafajinta orchid ee xaaladaha cusub;
xoojinta kartida ubaxa.
Caawimaad! Ma jiro wax khaas ah oo ku saabsan isticmaalka fiitamiinada ee quudinta orchids, waxaa muhiim ah in la raaco dhammaan xeerarka ku saabsan sameynta caynkan oo kale, oo aan u ogolaaneynin xad dhaaf ah.
Intee jeer ayey tahay inaad bacrimiso?
Ku samee fiitamiinnada lagama maarmaanka ah laga bilaabo Maarso ilaa Oktoobar Samee 2 asbuuc walba.
Sidee loo siiyaa dhirta xalka kooxda B ee guriga?
Vitamin B1 waxay leedahay saameynta soo socota ee orchid:
waxay kicisaa koritaanka nidaamka xididka;
kordhiyaa xajmiga ubaxa;
kobcinta geedi socodka ubaxa;
hagaajinaysaa dhaqdhaqaaqa unugyada gacanta;
Wuxuu ka ilaaliyaa orchid da 'dabiiciga ah.
Si aad u diyaarisid xalka, waxaad u baahan tahay 1 ampoule halkii 1 litir oo biyo ah.
Vitamin B3 waxay leedahay saameynta soo socota:
fududeeyaa dib u soo celinta orchids;
wuxuu kor u qaadayaa sameynta caleemo cusub;
waxay hagaajineysaa taranka.
Faytamiin B3 (1 ampoule) ayaa lagu qasi jiray 1 litir oo biyo ah.
Vitamin B6 waxay leedahay saameyntan soo socota:
waxay kordhisaa xoogagga ilaalinta ee geedka;
dib u soo celiyaa ubax ka dib xanuun iyo isticmaalka cayayaanka;
waxay hagaajineysaa isdhexgalka.
Codso fitamiin B3 qiyaasta 1 dhalada halkii 1 litir oo biyo ah.
Vitamin B12 waxay leedahay saameynta soo socota:
waxay qayb ka qaadataa wax soo saarka chlorophyll;
nuujiyaa unugyada ubaxa leh oksijiinka;
waxay keentaa koritaanka caadiga ah iyo koritaanka orchids.
Ku dhaji 1 dhalo vitamin B12 ah 1 litir oo biyo ah.
Si aad u diyaariso xalka fitamiin, waxaad u baahan tahay inaad isku dartid 1 ampoule oo vitamin ah oo lagu qasi karo 1 litir oo biyo ah. Oo biyuhu waa inay ahaadaan kuwo diiran oo la nadiifiyo.
Waxyaabaha fitamiinada ah waxaa loo isticmaali karaa waraabinta iyo dhirta dhirta. Waa in la sameeyaa 1-2 jeer bishii.
Vitamin cocktail ee dib u gurashada
Beerta kasta oo koreysa orchids waa in la ogaado in samaynta vitamin cocktail waa lagama maarmaan ma aha oo kaliya inta lagu jiro ubax, laakiin sidoo kale transplanting. Warshadu waxay dib u soo kabaneysaa wakhti dheer ka dib marka walwalku sidan yahay, sidaas daraadeed qaybaha waxtarka leh ayaa kicin doona hannaankan.
Thanks to vitamin cocktail, waxaad ku soo celin kartaa orchid in ay asal ahaan asalka ah, iyada oo la ilaalinayo dhammaan hawlaha. Ma jiro farsamo khaas ah oo loogu talagalay diyaarinta fitamiin coktail.. Waxaad kaliya u baahan tahay inaad isku dardarto fitamiino dhowr ah oo dardargeliya hawlaha bogsashada oo u oggolow warshadu in ay ka farxiso dadka kale muuqaalka muuqaalkiisa.
Waxaad isku dayi kartaa inaad dib u soo celiso ubax iyada oo la adeegsanayo fitamiin cittaastiin ah, oo ka kooban xubno B1, B6 iyo B12. U qaado 1 dhalo, ka dibna ku dar 2 kiniin oo ah succinic acid. Kala soocid dhammaan walxaha ku jira 1 litir oo biyo ah ka dibna isticmaal xalka si loo buufiyo ubaxa gudaha. Saameyn wanaagsan ayaa lagu arkay 2-3 maalmood.
Dhibaatooyinka yaraanta iyo xad-dhaafka
Haddii orchid ay ka maqan tahay nafaqada, markaa xanuunada soo socda waxay bilaabaan inay dhacaan.:
caleemaha, xididdada iyo burooyinkeeda way dhintaan;
midabka caadiga ah ee geedka ayaa lumay;
Orchid waxaa saameeya chlorosis;
koritaanka iyo ubaxu hoos u dhacaan.
Intaa waxaa dheer, in qaar ka mid ah growers ay qarxaan ubaxa, taas oo keeni karta dhibaatooyinka soo socda:
yareyn la'aanta birta iyo manganese ee dhirta;
Heerka koritaanka nidaamka xididka ayaa la jabiyaa;
chlorosis isdhexgal ah.
Sidee loo xalliyaa?
Haddii aysan jirin fitamiino ku filan, markaa wax waliba waa sahlan: waxaad u baahan tahay inaad u keento qiyaasta la tilmaamay iyo fiiri sida dhirtu si tartiib tartiib ah u imaanayso nolosha.
Waa muhiim! Haddii ay jirtey xaddi badan oo fiitamiin ah, markaa waxaad isku dayi kartaa inaad badbaadiso, haddii aad diiddo inaad quudiso 1-1.5 bilood.
Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad hubiso daryeelka dhirta oo dhan:
ku dhaji dheriga ubaxa ee daaqadaha leh qorraxda qorraxda;
Biyo sida ay ciidda u dillaacayso iyadoo la isticmaalayo biyo diirimaad oo keliya oo nadiif ah;
heerkulka warshadda waa in uu ahaado 18-20 digrii.
Vitamiin for orchids waa lagama maarmaanka u ah koritaanka buuxda, horumarka iyo ubax. Laakiin xaaladdan waxaa muhiim ah inaysan dhaafin oo lagu soo bandhigin nafaqooyinka qiyaasta adag ee la cayimay.
Boggayaga internetka, waxaan kuu diyaarinay aragtida guud ee hababka ugu wanaagsan ee loogu talagalay quudinta orchids waxayna ka wada hadleen sidii loo saxi lahaa. Diyaargarow ugu wanaagsan ee bacariminta, soosaarka iyo korriinka ayaa ah kuwan soo socda: Fitoverm, Aktara, Appin, Bona Forte, Zircon, Fitosporin, Agricola, Cagaarka Cytokine iyo Sucinic acid.